Soosaarayaasha & Shirkadaha RGB LED | Shiinaha RGB LED Factory
Saamaynta iftiinka sare leh afar hal hal 5054 RGB Series
Sharaxaadda Badeecadda RGBW5054package waxay leedahay wax soo saar highefficiencyintensity consumption Isticmaalka korantada sare angle xagal ballaaran oo daawasho iyo isir qaab qaab ah. Astaamahan ayaa ah xirmo makethis ah LED hagaagsan oo loogu talagalay barnaamijyo nal ballaaran oo ballaaran. The White Mid Power LED waxaa laga heli karaa kala duwan ee heerkulka midabka laga bilaabo2700K-650OK. Cabbirka: 5.0 × 5.4 mm Awooda: 0.25W / 2.0W Waxyaabaha Muhiimka ah ● RGB.W si madaxbannaan ayaa loo xakamayn karaa
Saamaynta iftiinka sare leh 2835 RGB Taxanaha midabka keliya ah
Sharaxaadda Badeecada Tani waa iftiinka iftiinka 'LED' 2835 LED waa qalab wax ku ool ah oo tamarta wax ku ool ah kaas oo xamili kara kuleylka iyo xawaaraha sare ee wadista. Shaxda xirmada yar iyo xaragada sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon nalka nalka LED-ka, nalka guluubka nalka, nalka tubada laydhka, nalka iftiinka iyo iwm. Qaybtani waxay leedahay daabacaad cag ah oo la jaan qaadi karta inta badan isla leedhka suuqa maanta Astaamaha ● Waxaa lagu heli karaa midab cad, midab dhexdhexaad ah iyo midab diiran m chromatici ku habboon ANSI ...
Saamaynta iftiinka sare leh seddex ka mid ah 5054 RGB Series
Sharaxaadda Alaabada Xirmada RGB 5054 waxay leedahay wax soo saar xoog leh oo wax soo saar leh, isticmaalka tamarta oo hooseeya, xagal ballaaran oo daawasho iyo isir qaab qaabeed kooban. Astaamahani waxay ka dhigayaan xirmadan mid ku habboon LED-ka barnaamijyo nal ballaaran oo ballaaran. Cabbirka: 2.8 × 3.5mm / 5.0 × 5.0 mm Awood: 0.2W / 0.5W Astaamaha Muhiimka ah ens Awoodda iftiinka badan iyo waxtarka sare ● La jaanqaadi kara habka dib u iibinta ● Caabbinta kuleylka oo hooseeya encapsul ...